Sherlock Holmes Akavakirwa 'Iwo Irregulars' Akave Akamiswa paNetflix Mushure MeMumwe Mwaka
musha Horror Varaidzo Nhau Sherlock Holmes Akavakirwa 'Iwo Irregulars' Akave Akamiswa paNetflix Mushure MeMumwe Mwaka
by Trey Hilburn III Dai 4, 2021
by Trey Hilburn III Dai 4, 2021 1,860 maonero
Izvo zvisina kujairika yatosangana nemagumo ayo kuNetflix. Iwo akateedzana ayo akatarira pasirese akakomberedza Sherlock Holmes naDr Watson haana kugara kwenguva refu zvachose mushure mekutanga kutanga kwegore rino.
Izvo zvisina kujairikavakatevera boka revachiri kuyaruka avo vakashandiswa mukugadzirisa nyaya dzaDkt Watson uye Sherlock Holmes. Mavara maviri emifananidzo aive akasiyana kwazvo maitiro avo echinyakare. Vakanga vari pasi chaipo pane zvakashata mune zvimwe zvinhu vachisiya vechidiki avo vaiwanzoshandiswa kuve ivo vega vaongorori uye kutarisisa kwechiratidziro.
Iyo nhepfenyuro yakaita zvakanaka-zvakakwana kuti ipinde muNetflix's top-10 slot mukati mekuvhura kwayo svondo kumashure pakupera kwaKurume. Saka, inofanira kunge yakaita zvakanaka.
Izvo zvisina kujairika iyo yaive yakavakirwa pabasa remunyori anozivikanwa Arthur Conan Doyle ane nyeredzi Thaddea Graham, McKell David, Jojo Macari, Harrison Osterfield naDarci Shaw, Clarke Peters naHenry Lloyd-Hughes vairidza chinzvimbo chaSherlock Holmes.
Ini ndinopomera kushambadzira pane ino. Iwo akateedzana aive asina kumbobvira ajekeswa nezve zvayaive zvakajeka nezve. Iyo zvakare yakasarudzika yekuviga lede kana zvasvika padanho rekubatanidzwa kwaDr Watson naSherlock Holmes.
Wakatarisa here Izvo zvisina kujairika? Iwe unosuwa here kuzviona zvichienda? Tiudzei muchikamu chemashoko.
Barney dinosaur auya kuzokudya muResident Evil: Village. Tarisa uone vhidhiyo yemutambo pano.